कुन मुलुकमा, बर्षमा कतिपटक सेक्स गरिन्छ ? | Narinepal
कतिपय मानिसहरुले सेक्स सम्बन्ध दिनहुँ राख्न मन पराउछन तर दिनहुँ गरेको सेक्स सम्बन्धले स्वास्थय्मा हानि समेत पुरयाउने यौन विशेषज्ञहरुले बताउछन ।
भारतमा पुरुषहरुले सेक्स पार्टनरसँग सेक्स सम्बन्ध राख्दा १७ प्रतिशतले मात्र कन्डोम प्रयोग गरेको तथा उनीहरुले दिउसोमा सेक्स गर्न नरुचाउने र बर्षमा ७६ पटक सेक्स गर्ने गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले बताएको छ ।
भारत लगायत २७ मुलुकमा गरिएको सो अनुसन्धानमा जापानमा ४९ प्रतिशतले कन्डोम प्रयोग गर्ने गरेका छन । जापानीहरुले १० दिनमा जम्मा १ पटक र बर्षमा जम्मा ३६ पटक यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका छन भने अमेरिकीहरुले बर्षमा १२७ पटक यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका छन ।
यसैगरी अमेरिकीले बर्षमा १४ जना, भारतीयले ३ जना र चिनियाले २ जना यौन पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध राख्ने गरेको पनि अनुसन्धानले बताएको छ ।
अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लगाएको छ की भारतीयले २० अमेरिकीले १६ र चिनियाले २२ बर्षको हाराहारीमा यौन सम्बन्धको स्वाद लिने गरेका हुन्छन ।
Posts Related to कुन मुलुकमा, बर्षमा कतिपटक सेक्स गरिन्छ ?
सानै उमेरमा सेक्सको ज्ञाता
सेक्स सबैको जीवनमा आवश्यक हुन्छ तर यसको लागि निश्चित समय भने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति युवा उमेरमा पुगेपछि मात्र उसले सेक्सको अनुभव लिन वा सेक्सको ...